IVuelio: Ipulatifomu Yakho Yezobudlelwano Nemidiya Nethonya | Martech Zone
Ubudlelwano bomphakathi bushintshe kakhulu ngokuqhuma kwemithombo yezindaba esikhathini sedijithali. Akusekho okwanele ukufaka izitolo ezimbalwa bese uhlanganisa uhlu lwenyanga lokukhulunywa ngalo ngomkhiqizo wakho. Namuhla, uchwepheshe wobudlelwano bomphakathi wanamuhla kufanele aphathe uhlu olukhula njalo lwabathonya nezincwadi, bese efakazela umthelela abanawo kumkhiqizo.
Isoftware ye-PR iguqukele ekusatshalalisweni kokukhishwa kwabezindaba okulula kuya ezinhlelweni zesimanje zokuphathwa kobudlelwano ezingasiza ucwaningo lobuchwepheshe bomphakathi, ukuthola, ukuxhumana, ukuzenzekelayo, nokukala umthelela abanawo egameni lamakhasimende abo.
IVuelio iyi-platform yesoftware ye-PR ehlanganisa zonke lezi zinto zobudlelwano bomphakathi wanamuhla. Qonda ukuthi ngubani obalulekile, ukuthi ungababandakanya kanjani kahle kakhulu bese uthumela okuqukethwe, uqaphe imiphumela, ulinganise umthelela wemithombo yezokuxhumana, futhi uhlaziye ukusebenza kahle, konke endaweni eyodwa.
Izici zeVuelio Faka
Isizindalwazi Sezindaba - Thepha ohlwini lwabezindaba olunamandla kakhulu embonini ye-PR. Ngokufinyelela okuqondile kwezintatheli ezingaphezu kwesigidi kanye nabathonya abavela emazweni acishe abe ngu-200, ungaxhumana nabantu ababaluleke kakhulu endabeni yakho, esihlokweni, noma enhlanganweni.
Ukuqapha Imidiya - Qonda ukuthi indaba yakho yamukelwe kanjani yizintatheli nabathonya ngamathuluzi wokulalela nokuhlola okuhlakaniphile. Ukuqapha kukuvumela ukuthi uhambisane nezindaba ezihamba phambili nokusakazwa kukho konke ukusakazwa, ukuphrinta, online kanye nemithombo yezokuxhumana.
Ukusatshalaliswa Kwezindaba - Thola kalula ukukhishwa kwakho kwabezindaba kubantu ababalulekile. Thumela izindaba ze-multimedia ngqo ocingweni, kwezenhlalo, ezinjinini, noma kuwebhusayithi yakho. Bese ulandelela, uhlaziye, futhi ufunde emiphumeleni yakho ngesikhathi sangempela.
Ukuhlaziywa Kwemidiya - Hlaziya ukuthi yamukelwa kanjani indaba yakho bese uthola ukuqonda okusebenzayo ukwenza ukuxhumana okuzayo kusebenze kangcono kakhulu. Bona ukuthi yimiphi imilayezo, okuqukethwe, neziteshi ezisebenzayo (futhi ezingezona) nezintatheli zakho ezibalulekile nabathonya. Thola ukuqonda kokuthi ungazifinyelela kanjani ngempumelelo izethameli zakho, uthuthukise i-ROI, futhi uthuthukise idumela lomkhiqizo.
Igumbi lezindaba eliku-inthanethi - Yenza okuqukethwe kwakho kutholakale kalula kuzintatheli, ababambiqhaza, kanye nabathonya esikhungweni semidiya esenziwe ngezifiso online. Shicilela kalula ukukhishwa kwabezindaba, izithombe, nolwazi olusekelayo ngenkathi ufinyelela idatha oyidingayo ukuze uthuthukise ukusebenza kwakho konke okwenzayo.
Canvas - Dala isethulo esihle esibonakalayo kubabambiqhaza bakho sokuthi indaba yakho ibikwe kanjani ngemizuzwana. Ukusatshalaliswa kwezindaba ze-Curate, umsebenzi wezenhlalo, ividiyo, kanye neziqeshana zomsindo ukudala umkhankaso omangalisayo wombukiso ngemizuzwana.
Ukuphathwa kwe-FOI - Phatha kalula yonke inqubo yakho yeNkululeko Yolwazi. Gcina umkhondo wezikhathi zokugcina, yenza izinombolo, bese wenza imibiko ngokushesha ngenombolo nohlobo lwezicelo, njengoba kudingwa yi-FOI Act 2000.
Ukuphathwa Kwabathintekayo - Phatha ukuxhumana okubalulekile ngesikhungo sokuphatha oxhumana nabo esenziwe lula. Gcina ukuxhumana kuhambisana nezintatheli nabathonya kulo lonke iqembu lakho ngokuba nehabhu elilodwa le-inthanethi elilodwa elichaza konke ukuxhumana phakathi kwethimba lakho nababambiqhaza abakhulu.
Ukuphathwa Kobudlelwano Nabezindaba - Sakaza lonke isu lakho lokuxhumana ngesikhungo somkhankaso esimaphakathi. Isoftware kaVuelia yokuphatha imidiya ikongela isikhathi ngokwenza kube lula ukuhlela, ukwabelana, nokubika ngakho konke okwenziwa yithimba lakho, ngokulandelela okuzenzakalelayo, ukuhlanganiswa kwe-imeyili, kanye namathuluzi wokubika nokuhlaziya asezingeni eliphezulu.
Xhumana noVuelio ngentengo nolwazi
Tags: inkululeko yolwaziimininingo egciniwe yemidiyaukuqapha imidiyaukuphathwa kobudlelwano nabezindabaukusatshalaliswa kwezindabaukusatshalaliswa kokukhishwa kwezindabaigumbi lezindaba eliku-inthanethiipulatifomu ye-pitchipulatifomuukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindabaisoftware yezobudlelwano nomphakathiukuphathwa kwababambiqhazavuelio